Viber dia mamela ireo mpampiasa tratry ny fameperan'i Trump hiantso maimaim-poana | Vaovao momba ny gadget
Hatramin'ny faran'ny herinandro lasa teo, rehefa nisy ny didin'i Executive Trump izay nanakana ny olona teraka tany Syria, Iraq, Iran, Sudan, Somalia, Yemen ary Libya tsy hiditra ao amin'ny firenena, na dia manana karatra maintso sy fahazoan-dàlana any Etazonia aza izy ireo. . Betsaka ireo orinasan-teknolojia, toa ny tena voakasik'izany, izay milaza ny tsy fahazoan-dry zareo. Iray amin'ireo orinasa voadona mafy indrindra ny Google, izay nahita ny fomba tsy ahafahan'ny mpiasan'ny 187 miverina miverina any Etazonia satria teraka tany amin'ny iray amin'ireo firenena fito voalaza etsy ambony izy ireo. Fa afa-tsy ny fidradradradrana sy ny fitarainana any an-danitra, kely sisa no ataon'ireto orinasa milaza azy ireo fa voakasik'izany indrindra amin'ity lalàna vaovao ity izay haharitra 3 volana amin'ny voalohany, saingy misy ny mety fanitarana.
Viber, iray amin'ireo orinasam-pandefasan-kafatra eo noho eo izay mahomby kokoa any amin'ny firenena Arabo, ary izany dia nanolotra serivisy VoIP efa an-taonany maro mba hanao antso amin'ireo laharana an-tanety na finday any amin'ny firenen-kafa, toa ny Skype, ankoatry ny famelana ny antso eo amin'ireo mpampiasa maimaimpoana. Vao nanao fanambarana ny orinasa milaza fa noho ny zava-nitranga vao haingana tany Etazonia dia hamela antso an-tariby maimaimpoana amin'ireo laharana finday na laharana finday any Etazonia, Syria, Irak, Iran, Somalia, Sudan, Yemen ary Libya, ka Ny fifandraisana amin'ny telefaona dia tsy sakana hafa.
Ireo mpampiasa rehetra monina any amin'ireny firenena ireny ary nanao fifanarahana na te hanao fifanarahana amin'ny tahan'ny na voucher hanao antso amin'ireo firenena ireo dia hiseho maimaimpoana izany, ka afaka miantso izy ireo nefa tsy esorina amin'ny taha. Ny orinasa dia tsy namaritra ny fetra minitra isan'andro ho an'ity tolotra ity, satria azo antoka fa misy fetra, satria ny Viber dia tsy orinasa toa Skype azonao atao ny manome antso tsy voafetra. Fihetsika tsara avy amin'ny orinasa, izay te hanararaotra azy ihany koa mba hahazoany laza any Etazonia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Viber dia mamela ireo mpampiasa tratry ny fameperan'i Trump hanao antso maimaim-poana
Manidy ny tranokala Activation Lock i Apple. Sarotra ny mahita raha misy iPhone angalarina